Wednesday March 14, 2018 - 11:25:36 in Wararka by Super Admin
Shalay oo kale 13,March, 2014 ayay ciidamada Jabuuti oo ay kaabayaan kuwa Itoobiya waxay si nabad gelya ah kula wareegeen degmada Buula Barde ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya.
Khariiradda Buula Burde
Magaaladaan oo ah magaalada 2-aad ee ugu weyn gobolka Hiiraan marka laga reebo magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka ayay qabsashadeeda wax weyn usoo kordhin ciidamada shisheeye iyo dowladda Federaalka kadib markii xarakada Al Shabaab ay magaalada ka dhigtay mid go'doon ah.
Magaalada Buulo Barde oo ka hor qabsashadii Jabuutiyaanka ahayd mid horumar ku tallaabsanaysay, ayaa hadda u muuqata meel baaba’ ah, wadada laamiga ah ee isku xirta Koonfurta iyo soomaaliya inteeda kale ayaa go'an muddo afar sanadood ah.
Gaadiidka dadweynaha ayaa isticmaalo waddo dhanka galbeed ka marta gobolka Hiiraan sababtoo ah Buula Burte waa magaalo go'doon ah oo aan loo ogoleyn in lagalo ama lagasoo baxo marka laga reebo diyaarado ay isticmaalaan saraakiisha ciidamada Jabuuti.
Al Shabaab waxay ku guuleysatay in ay dhulka geliso hammigii ay Jabuuti iyo Itoobiya ka lahaayeen Buula Burde oo ahaa in ay ka dhigtaan talis ay uga duullaan bartamaha Soomaaliya islamarkaana ay ku faafiyan dhaqamada dimuquraadiyadda taasi bedelkeed magaaladu waa mid haawanaysa oo dadka kunool ay aad u yaryihiin.
Afarta sanadood ee ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya heystaan Buula Burde waxay ku faafiyeen dhaqan xumo sida iyagoo hirgeliyay saldhigyo ay tagaan haweenka jirkooda ka ganacsada, saraakiisha Jabuuti ayaa dhaqamada qaawanaanta iyo zinada ay kasoo minguuriyeen Faransiiska waxay ku dhax faafinayaan bulshada soomaaliyeed.
Col.Cismaan Dubbad oo ah taliyaha ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan sii joogi doonin Buula Burde islamarkaana dowladda Federaalka looga baahanyahay in ay dhisato ciidan awood leh, guddoomiyaha Buula Burde ugu magacaaban maamulka Hirshabelle ayaa isna sheegay in afar sanadood kadib Buula Burde ay tahay magaalo go'doonsan oo aysan kajirin haba yaraatee adeegyadii bulshada isagoo Dowladda Federaalka dhaliil kulul ujeediyay.
Haweenay la shaqeysa ciidamada Jabuuti oo Buula Burde ku sugan ayaa iyana warbaahinta u sheegtay in aysan awoodin in magaalada lug uga baxaan oo ay ka baqayaan Al Shabaab iyadoo ciidamada Jabuuti ku dhaliishay in waxbadan aysan ka qaban gobolka, Buula Burde oo mar kamid aheyd magaalooyinka ugu ganacsiga badan Soomaaliya hadda waxay umuuqataa mid gabtay hankeedii magaalo kadib markii uu gumeysi dul degay.
inkabadan 10 howlgal oo aad uballaaran ayuu taliska ciidanka AMISOM ku dhawaaqay si magaalada Buula Burde go'doominta looga qaado balse dhammaan howlgalladaas ayaa fashilmay, boqolaal askari oo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan isugu jira ayaa ku dhintay howlgalladii ladoonayay in waddooyinka loogu furo magaalada.
Meel aan sidaas uga fogeyn magaalada waxaa ku sugan kumanaan ciidamo Itoobiyaan ah kuwaas oo ku guuleysan waayay in ay go'doominta ka qaadaan Buula Burde, ciidamada Itoobiya ee saldhigyada ku leh deegaanka Halgan qudhoodu waxay wajahayaan go'doomin raagtay waxaana saadka ciidan loogu daabulaan diyaaradaha UN-ka.
Dagaalka Jabhadeynta ee Shabaabul Mujaahidiin ku dhawaaqday sanaddii 2011 ayaa wax badan ka bedelay loollanka Soomaaliya wuxuuna dagaalkaas xeryo kooban ku ooday tobanaan kun oo askari kuwaas oo ka socda illaa 6 dowladood Afrikaan ah islamarkaana dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka.
Halkan ka dhageyso Taliska Jabuuti iyo saraakiisha DF-ka oo ka hadlaya xaaladda Buula Burde MP3